Umashele emzini wekhansela Umphakathi waKwaPata | News24
Umashele emzini wekhansela Umphakathi waKwaPata
ZIYANDA izinkinga phakathi kwekhansela le ndawo uMnuz Nkosinathi Gambu, nomphakathi waKwaPata njengoba lo mphakathi umashele emzini walo uyofuna izimpendulo zokuthi kungani kuhlehliswe umhlangano wokudingidwa udaba lokumiswa kokwakhiwa kwezindlu kule ndawo.
Lo mhlangano bekufanele ube ehholo lomphakathi kulendawo ngoLwesithathu olwedlule mhlaka -3 kuNhlaba (May) ngo-5 ntambama kodwa wagcina uhlehlisiwe.
Amalungu omphakathi abehlangene ehholo avuke umbhejazane amashela emzini wekhansela ethi ayofuna izimpendulo.
Ngokuthola kwe-Echo ngomthombo wayo owawukhona ehholo uthe into eyadina umphakathi ukuthi umhlangano wahlehliswa sekusele imizuzu eyi-10 kuphela ukuthi uqale futhi kwakungekho muntu owayephuma kwaMasipala uMsunduzi, abaphuma enkampanini ebeyakha lezi zindlu i-Fairfield kanti nalo ikhansela bathi belingabonwa nangokhalo.
Uthe : “Umqhafazo wathunyelwa kumalungu ekomidi lokwakhiwa kwalezi zindlu kuthiwa umhlangano uyahlehla kwangashiwo ngisho izizathu.
“Amanye amalungu omphakathi ayesefikile ehholo ngesikhathi kuthunyelwa umyalezo wokuhlehla komhlangano kwikomidi lohlelo lokwakhiwa kwezindlu.
“Kwakuthiwa alimemezele nini ukuthi umhlangano uhlehlile?
“Umhlangano wawubizwe ikhansela kodwa umyalezo wawuvela kumsebenzi wakwamasipala nokwathi uma efonelwa ebuzwa ukuthi kungani umhlangano uhlehlile wavele woma insini wasitshele ukuthi asibuze ikhansela nesathi uma silifonela umakhalekhukwini walo wakhala wangabanjwa,” kubeka umthombo.
UMnuz Gambu uziphendulele ngalezi zinsolo wathi amalungu omphakathi aziswa kusanesikhathi ngokuhlehla komhlangano futhi umhlangano wawungabizwanga uyena.
“Umhlangano wawuhlanganise uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu, inkampani eyakha izindlu, uMasipala uMsunduzi kanye nami njengekhansela.
“Ukuhlehliswa kwawo kulandela ukuthi inkampani lena eyakha izindlu ithe ngeke ize ikwazi ukunikeza zonke izimpendulo ezazifunwe umphakathi ngaphambilini mayelana nohlelo lokwakhiwa kwezindlu.
“Inkampani yabe isithembisa ukuthi izokwazi ukunikeza kahle zonke izimpendulo ngomhla ka -12 kuNhlaba (May) nokuyikona okwenza ukuthi kuhlehliswe umhlangano.
“Sasingeke sikwazi ukuqhubeka nomhlangano ngoba sithi sifuna ukuyobatshela ukuthi izimpendulo ngeke baze bazithole kodwa bazozithola emhlanganweni olandelayo.
“Imiqhafazo ithunyelwe kusanesikhathi kwikomidi ukuze lizokwazisa umphakathi ngokuhlehla komhlangano,” kubeka yena.
Uqhube wathi ngosuku okwakumele kube nomhlangano wezwa kuthiwa umphakathi uhlangene ehholo kodwa wathi uma efika wezwa sekuthiwa umphakathi uhambile waya emzini wakhe.
“Ngahamba ngaya khona ehholo kodwa ngafika sekuthiwa umphakathi usuhambile uthe uya emzini wami.
“Ngabe sengiphuthuma ekhaya nami ngithi ngiyovikela umndeni wami ngoba ngangingazi ukuthi umphakathi uzokwenzani.
“Ngesikhathi ngisendleleni eya ekhaya ngadlula amalungu omphakathi endleleni etoyitoya eya emzini wami amanye ephethe izibhamu ngezandla.
“Kwabe sekufika abanye ozakwethu beza ekhaya bezoqapha isimo.
“Ngesikhathi umphakathi ufikile wasabisa ngokubulala amawindi ezimoto zalabo ababegade emzini wami.
“Abanikazi bezimoto babe sebesuka beya ezimotweni zabo bethi bayovimba umphakathi ukuba ungazilimazi izimoto.
“Kwenzeka konke lokhu nje mina ngimile emzini wami.
“Emva kwalokho ngabona sekubanjwana ngezandla sekuliwa, ngezwa sekuqhuma nesibhamu kathathu umphakathi wabe usuyahlakazeka.”
Emva kwalesi sigameko kubikwa ukuthi kunowesilisa owalimala onyaweni ngemuva kokudubuleka futhi kunowesifazane owashayiswa yimoto ngesikhathi kunesiphithiphithi kubalekwa.
Lo wesilisa kuthiwa waphuthunyiswa esibhedlela i-Edendale nalapho afika alashwa khona wafakwa ukhonkolo wabe eseyadedelwa.
Okhulumela amaphoyisa esiteshini iPlessislaer uKapteni Musa Ntombela akatholakalanga ngesikhathi sokushicilela.